Taiwan: Nofinofy toy inona no andrasantsika amin’ny Lalao Ôlaimpika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2008 11:03 GMT
Raha mikarakara ny Lalao âlaimpika 2008 i Sina dia nilaza hoe “tontolo iray, nofinofy iray, inona no andrasantsika amin'io nofonofy io?
Nazavain'i Schumann ny niavian'ny afo Ôlaimpika:
Mialoha ny Lalao Ôlaimpika taloha dia nandrehitra afo teo anoloan'ny Tempolin'i Zeus l'Olympien ny mponina Grika fahiny. […] Ilay mitondra ny afo dia mihazakazaka no sady miantsoantso hoe: ‘ atsaharo ny ady fa ‘ndeha hilalao!’ Tamin'ny toerana rehetra nolalovan'ny afo, nitsahatra ny ady. […] Namonjy ny Lalao Ôlaimpika daholo ireo mponina Grika fahiny, adinony ny fifankahalàna sy ny ady. Vokany, ny afo, izay fitaovana nampiasaina handefasana hafatra, nanjary mariky ny fandriampahalemana, fahazavana sy firahalahiana.
Na izany aza, dia hoy i Schumann,
Nitsoriadriaka namakivaky làlana maro toy ny voalavo ity afo Ôlaimpika ity mba hialàna amin'ireo tsy mpankasitraka. Imasom-bahoaka ny tsiny atoraka ny afo Ôlaimpika ataon'ny governemanta Sinoa.
Maro irao Taiwanais niady hevitra raha toa ka tokony hanaovana ankivy ity afo Ôlaimpika ity noho ny governemantan'i Sina tompon-daka amin?ny fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona. AW dia miresaka ny tanjon'ny governemantan'i Sina amin'ny fikarakarana ity Lalao âlaimpika ity:
Ny Antoko communiste sinoa mihevitra ny haneho hibaribary fa hoe mamim-bahoaka izy (manana tanjaka) amin?ny fikarakaràna ny Lalao Ôlaimpika. […] Raha mirefodrefotra ny tehak'ireo olona any an-kianja, ireo mpiaro ny zon'olombelona kosa mety mbola mijalijaly any am-ponja rehetra any. Raha maneho fankasitrahana ho an'ny governemantan'i Sina amin'ny fanatrehana ny lanonam-panokafana ireo mpitarika ara-pôlitika tandrefana, dia hikokotra mafy hitantana an'i Sina mandrakizay ny Antoko Communiste eto Sina.
Door and window no manontany izay sahy handray andraikitra hahamatroka ny afo Ôlaimpika?
Ireo mpitondra firenena rehetra no tokony handray andraikitra hahamatroka ny afo Ôlaimpika.
Aiza ireo firenena mirehareha ho demôkratika?
Aiza ireo firenena mirehareha ho miaina anaty fahalalàhana?
Aiza ireo firenena nantsoina ho mpandamina izao tontolo izao? Sa nalemy tsy afa-mihetsika intsony izy ireo?
Tsara loatra. Hitantsika izao hoe mihena ireo fiarovana ara-moraly mamin-dry zareo manoloana ny fitondrana tsy refesi-mandidy.
Zendana i doctor61 amin'ny fomba fitohizan'ny fitondrana sy fifindrafindran'ny afo Ôlaimpika:
Voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena mampiantrano ny Lalao Ôlaimpika izao no nilàna fanetsehana ireo teratany Sinoa monina any am-pitandranomasina sy ireo “mpiaro mahatoky” mba “hiaro” ny afo Ôlaimpika.
Etsy andaniny, maro no gaga nanoloana ny fitakian'ireo olona manohana an'i Tibet hanaovana ankivy ny afo Ôlaimpika. Nanamarika i forumvisitor,
Zendana aho mahita ny fanohanana avy any ivelany azon'ireo Tibetana, indrindra fa tsy dia maro loatra noho ny Sinoa ny Tibetana monina any am-pitandranomasina. Mieritreritra aho fa tokony hianatra ireo Tibetana ireo isika ary hiaro ireo namana ireo.
Manohana ny ankivy i Door and window:
Nisento aho nanaraka ny fitondrana sy fifindrafindran'ny afo nandritry ny andro maro. Raha namoritra an'i Tibet ny governemantan'i Sina, tsy mba nandre zavatra mikasika ny fanaovana ankivy ny afo Ôlaimpika izahay.
I Singapour aza dia nanohana ny asan'ny governemantan'i Sina. Sento.
Na izany aza, tsy ho very akory ny rariny (ny fahamarinana).
Taorian'ny tohana maro be avy amin'ny olona mpiaro ny zon'olombelona, maro ireo mpitarika (mpitondra) nilaza fa tsy hanatrika ny lanonana hanokafana ny Lalao Ôlaimpika.
Sento. Raha tsy manandra-peo toy izao ataontsika izao isika, dia tsy hisy hiteny.
mobobeijing2008 nihevitra fa tokony ho niombon-kevitra amin'ny fanaovana ankivy koa i Taiwan:
I Taiwan dia efa norahonan'ny tafika avy any Sina. […] Fotoana tokony hararaotintsika izao hiarahana amin”ity hetsika efa tsy voafetran'ny sisintany ho fanaovana ankivy ity […] sy hangatahana ny governemantan'i Sina tsy handray ny afo Ôlaimpika amin?ny tànana havanana nefa hitondra bala-afomanga amin'ny tànana havia. […] Tokony hanome toky ny governemantan'i Sina fa tsy hampiasa ny tafika ho famahàna ny olana any Taiwan.
Nony lasa lalina ity resaka fanaovana ankizy ity any Sina, nikorapaka nanentana ny olona ny governemantan'i Sina mba tsy hanafangaro ny resaka pôlitika sy ny lalao (atletisma). Na izany aza, tsy nisy nanoina ity antso ity.
Hoy i johnnio,
Tany aloha tany dia tsy nanatrika Lalao Ôlaimpika i Sina noho ny olana pôlitika, nefa ankehitriny dia izy indray no miteny amintsika mba tsy hanafangaro ny resaka pôlitika sy ny lalao (atletisma). Mahay ny atsy sy mahay ny aroa ka saro-takarina.
Hoy i no justice,
Pôlitika ve ny pôlitika? Raha naniry ny hiditra amin'ny Fiombonam-be Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana i Taiwan, izay tsy fikambanam-be ara-pôlitika, nahoana no nosakanan-dry zareo isika?
Ny fanaovana ankivy ny Lalao Ôlaimpika – Beijing 2008 dia tsy olana pôlitika fotsiny. Mikasika indrindra koa izy io ny amin'ny fanirian'ny olon-drehetra maneran-tany mba hifampizara sy hifanakalo.